Ogaden News Agency (ONA) – Cali Dhaanto, oo ka qeybgalay xaflad heersare ah oo Dhalinta OYSU ee Jaaliyada Kenya qabatay caawa.
Cali Dhaanto, oo ka qeybgalay xaflad heersare ah oo Dhalinta OYSU ee Jaaliyada Kenya qabatay caawa.
Cali Dhaanto Iyo Waayaha Cusub oo cafis Weydiistay Jaaliyada Ogadeniya
Xaflad bandhig faneed ah oo ururka Dhalinyarada Ogaadeeniya ee OYSU ay soo qaban qaabiyeen ayaa caawa waxay ka dhacday magaalada Nairobi, xaflada oo ay ka qayeb galeen fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa waxaa kamid ahaa fanaaninta ka qayeb gashay
Cali Dhaanto, Fanaaniinta Waayaha Cusub, iyo fanaanada wayne qaaliga ah Fartuun Birimo.
Fanaantiinta Waayaha Cusub iyo Cali dhaanto oo kamid ahaa koox-faneedka Liyuu Policeka in muda ahna ku suganaa dalka Kenya ayaa caawa waxay meel fagaaro ah cafis ka waydiisteen shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.
Cali dhaanto oo ah fanaan da’yar ayaa waxuu sheegay in uu aad u qoomamaynayo shaqadii uu jigjiga ka qabanayey iyo dhaantooyinkii uu u sameeyay ciidanka Liyuuga.
Sidoo kale Fanaaniinta Waayaha Cusub oo wax yaabihii ay ku soo caanbexeen ay kamid ahaayeen heeso ay u ka sameeyeen guumaysiga Ethiopia ayaa sanad ka hor jigjiga ka qaaday hees lagu waxyeelaynayo Halganka waxayna caawa codsadeen in qaladkaas ay galeen laga cafiyo.
Xaflada ayaa guul ku dhamaatay waxayn dadweynihii aad u soo dhaweeyeen codsigaas kayimid fanaaninta.
Warbixintan faah faahinteda dib ayaan idiinku soo gudbin doona Balse Hoos ka daawo sawiradi Xafladan sida heerka sare ah u qabsoontay.
Guul iyo gobanimo. Maanshaalh mar haddii halqi intaa la eg ay maanta halmeel oo isugu yimaadeen shaki kuma jiro in JWXO ay tahay kacdoon barakaysan. Allow adiga aya mahadaas iska leh. Gumeysigii iyo daba dhililkiisi hadii ay caawa kobtan joogi lahaayeen dib dambe loogama maqleen dacaayadaha raqiiska ah. Fanaanka weyn ee Ogadeniya, Cali dhaanto wan soo dhaweynaynaa. Xaqa aya Ilahay tusay. Inta kalena walaalahooda dhinac ha ka raacaan. Aniga waxa aan hubaa in dhamaan shacabka Ogadeniya jooga ay taageeranyihiin Halganka JWXO ay noo horseeda., Guul iyo Gobanimo
mashaaalah xaga ayeey fahmeeen labadaan fanaaaan noloow ali dhanto my bro